कसरी हार्ड डिस्क र बाह्य ड्राइभको आइकन हेर्नुहोस् म म्याकबाट हुँ
ओएस एक्समा उपलब्ध विकल्पहरूमध्ये एउटा यो हो कि हाम्रो डेस्कटपमा हाम्रा आन्तरिक र बाह्य हार्ड ड्राइभहरू, सीडीहरू, डीभीडीहरू, आइपडहरू वा बाह्य सर्भरहरूको आइकनहरू सबै पटक हेर्नुहोस्। यो विकल्प धेरै समय अघि थपिएको थियो, विशेष गरी ओएस एक्स शेरमा जब एप्पलले नेटिभ इन आईकनहरूको दृश्य हटाउँदछ जुन हाम्रो प्राथमिकता अनुसार उनीहरूलाई सक्रिय वा निष्क्रिय गर्न सक्षम हुनेछ।
प्रत्येक चोटि जब हामी हाम्रो म्याकलाई स्क्र्याचबाट पुनःस्थापना गर्छौं यो मेनू यसको प्रारम्भिक अवस्थामा फर्किन्छ, कुनै आइकनहरू छैनन्। डेस्कटपमा डिस्कहरू र अन्यहरूका लागि आइकनहरू पुनः सक्रिय गर्न हामीले सिधै खोजकर्ता प्राथमिकताहरूमा जानुपर्नेछ र बाकस जाँच गर्नुहोस्।
यो कार्यान्वयन गर्न सजिलो छ र म निश्चित छु कि तपाईं धेरैलाई पहिले नै यो थाँहा छ, तर यो धेरै प्रयोगकर्ताहरूको लागि उपयोगी हुन सक्छ जुन ओएस एक्स प्रयोग गरेको छोटो समयको लागि। नयाँ iMac को सुरूवात निश्चित रूपमा एक भन्दा बढिले आफ्नो पीसी परिवर्तन गर्न सुरु गर्दछ र म्याकमा स्विच गर्दछ, त्यसैले यी सरल ट्यूटोरियलहरू पक्कै परिवर्तनमा उनीहरूलाई मद्दत गर्दछ। हाम्रो डिस्कहरूको आइकनहरू सक्रिय गर्न हामी पहुँच गर्दछौं खोजकर्ता प्राथमिकताहरू - सामान्य र हामी आइटमहरू चयन गर्दछौं जुन हामी डेस्कटपमा आइकन मोडमा देखा पर्न चाहन्छौं।
यसका साथ हामी गर्न सक्दछौं तपाईंको हार्ड ड्राइव र बाह्य ड्राइभहरूको लागि आइकन हेर्नुहोस् डेस्कटपमा जब तिनीहरू हाम्रो म्याकमा जडित छन् र हामीले फाइडर मेनूबाट छनौट गरेका छौं। यदि कुनै पनि कारणको लागि हामी आइकनहरू देखाउन चाहँदैनौं, हामी फेरि विकल्पहरू अनचेक गर्छौं र यो नै हो।
लेखको पूर्ण मार्ग: म म्याकबाट हुँ » एप्पल » ट्यूटोरियलहरू » तपाईंको म्याक डेस्कटपमा तपाईंको हार्ड ड्राइव र बाह्य ड्राइभहरूको लागि आइकन कसरी हेर्ने
धेरै धेरै धन्यवाद! यो सिएरा मा सही काम।
Ramiro लाई जवाफ दिनुहोस्
के तपाईंले पहिले नै आफ्नो एप्पल वाच अपडेट गर्नुभयो? 95%% भन्दा बढि यो अपडेट गरिएको छ